ဝမ်းသာ စရာသတင်းပါ !!! ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး စိတ်ချ ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ အသိ အမှတ်ပြု ကိုဗစ် ကာကွယ် ဆေး ‌ပေါ်လာ ပါပြီ – Shwe Ba
Homepage / International News / ၀မ်းသာ စရာသတင်းပါ !!! ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး စိတ်ချ ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ အသိ အမှတ်ပြု ကိုဗစ် ကာကွယ် ဆေး ‌ပေါ်လာ ပါပြီ
၀မ်းသာ စရာသတင်းပါ !!! ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး စိတ်ချ ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ အသိ အမှတ်ပြု ကိုဗစ် ကာကွယ် ဆေး ‌ပေါ်လာ ပါပြီ
ဖိုက်ဇာ နှင့် ဘိုင်အိုအင်န်တက်ခ် (Pfizer နဲ့ BioNTech) တို့ က ယင်း တို့ ၏ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး သည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ထိ ရောက် မှု ရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြော ကြား ပြီး သိပ္ပံ ပညာနှင့် လူသားတို့ အတွက် အထင် ကရ နေ့တစ်နေ့ဖြစ် တယ် လို့ ဂုဏ်ယူ ပြောဆို လိုက်ကြ ပါ တယ် ။ ဖိုက်ဇာ ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အမှုဆောင် အရာရှိ ချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ အဲလ်ဘတ်ဘော်လာ က စမ်းသပ် တွေ့ရှိ မှုရ လာဒ်တွေ ဟာ သိပ္ပံပညာ နှင့်လူသား မျိုးနွယ်တွေ အတွက် အထင် ကရနေ့ဖြစ်တယ် လို့ပြောလိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးထားသူ တွေနဲ့ အာနိသင်မဲ့ ဆေးထိုးပေးသူတွေ အကြားနှိုင်းယှဉ် ကြည့်တဲ့ အခါ ဒုတိယ မြောက်ဆေးထိုး အပြီး (၇) ရက် အကြာ မှာ ကာကွယ်ဆေး က အကျိုး အာနိသင် သက်ရောက်မှု ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ထိရောက်မှု ရှိတာတွေ့ရတယ် လို့ ဖိုက်ဇာ နှင့် ဘိုင်အိုအင်န်တက်ခ် တို့ က ပြော ပါ တယ် ။ ဆိုလို တာ က တော့ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုး အပြီး ၂၈ ရက်အကြာ မှာ ကိုဗစ် ကာကွယ်နိုင် စွမ်း တွေ့ရတဲ့ သဘောဖြစ် ပါ တယ် ။ ဆေး က နှစ်လုံး ( နှစ်ကြိမ် ) ထိုးရမှာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ “ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ကိုမြင်နေ ရပါပြီ ” လို့ ဒေါက်တာ အဲလ်ဘတ်က ပြောပါတယ် ။ ” ဒီကာကွယ်ဆေး ရဲ့ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အ ပေါ်အကျိုးသက် ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်လိုက်ရင် ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း သိသာထင်ရှားမှုအရှိဆုံး ဆေးပညာတိုးတက်မှုတစ်ရပ်ပဲ ” လို့ သူ ကပြော ပါ တယ် ။
သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ က ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အကျိုးသက်ရောက် မှု ရှိမယ့် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး တွေကိုပဲမျှော်လင့်ထားတာပါ။ အိမ်ဖြူတော် က ကိုဗစ် အကြံပေးဒေါက်တာအန်ထော်နီဖော်ချီ က ကာကွယ်ဆေးဟာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိရင်ပဲ လက်ခံလို့ရ တယ် လို့ပြောထား တာဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အမေရိကန်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးဌာနကို အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ပြုတဲ့ ကာ ကွယ် ဆေးအဖြစ်ခွင့်ပြုဖို့ နိုဝင်ဘာလ တတိယ ပတ်လောက် မှာ လျှောက်ထားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိ ရ ပါ တယ် ။
ကိုကို : စက်မှု တက္ကသိုလ်
ဖိုကျဇာ နှငျ့ ဘိုငျအိုအငျနျတကျချ (Pfizer နဲ့ BioNTech) တို့ က ယငျး တို့ ၏ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး သညျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောထိ ရောကျ မှု ရှိတယျလို့ ထုတျဖျောပွော ကွား ပွီး သိပ်ပံ ပညာနှငျ့ လူသားတို့ အတှကျ အထငျ ကရ နတေ့ဈနဖွေ့ဈ တယျ လို့ ဂုဏျယူ ပွောဆို လိုကျကွ ပါ တယျ ။ ဖိုကျဇာ ရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ နှငျ့ အမှုဆောငျ အရာရှိ ခြုပျဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာ အဲလျဘတျဘျောလာ က စမျးသပျ တှရှေိ့ မှုရ လာဒျတှေ ဟာ သိပ်ပံပညာ နှငျ့လူသား မြိုးနှယျတှေ အတှကျ အထငျ ကရနဖွေ့ဈတယျ လို့ပွောလိုကျ တာ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ကာကှယျဆေး ထိုးပေးထားသူ တှနေဲ့ အာနိသငျမဲ့ ဆေးထိုးပေးသူတှေ အကွားနှိုငျးယှဉျ ကွညျ့တဲ့ အခါ ဒုတိယ မွောကျဆေးထိုး အပွီး (၇) ရကျ အကွာ မှာ ကာကှယျဆေး က အကြိုး အာနိသငျ သကျရောကျမှု ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး ကြျော ထိရောကျမှု ရှိတာတှရေ့တယျ လို့ ဖိုကျဇာ နှငျ့ ဘိုငျအိုအငျနျတကျချ တို့ က ပွော ပါ တယျ ။ ဆိုလို တာ က တော့ ပထမဆုံး ကာကှယျဆေးထိုး အပွီး ၂၈ ရကျအကွာ မှာ ကိုဗဈ ကာကှယျနိုငျ စှမျး တှရေ့တဲ့ သဘောဖွဈ ပါ တယျ ။ ဆေး က နှဈလုံး ( နှဈကွိမျ ) ထိုးရမှာ ဖွဈ ပါ တယျ ။ “ မြှျောလငျ့ခကျြ ရောငျခွညျကိုမွငျနေ ရပါပွီ ” လို့ ဒေါကျတာ အဲလျဘတျက ပွောပါတယျ ။ ” ဒီကာကှယျဆေး ရဲ့ ပွညျသူ့ ကနျြးမာရေး နှငျ့ ကမ်ဘာ့ စီးပှားရေး အ ပျေါအကြိုးသကျ ရောကျမှုကို ထညျ့သှငျးတှကျခကျြလိုကျရငျ ဒါဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁၀၀ အတှငျး သိသာထငျရှားမှုအရှိဆုံး ဆေးပညာတိုးတကျမှုတဈရပျပဲ ” လို့ သူ ကပွော ပါ တယျ ။
သိပ်ပံ ပညာရှငျတှေ က ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အကြိုးသကျရောကျ မှု ရှိမယျ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး တှကေိုပဲမြှျောလငျ့ထားတာပါ။ အိမျဖွူတျော က ကိုဗဈ အကွံပေးဒေါကျတာအနျထျောနီဖျောခြီ က ကာကှယျဆေးဟာ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျရှိရငျပဲ လကျခံလို့ရ တယျ လို့ပွောထား တာဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ အမရေိကနျအစားအသောကျနှငျ့ဆေးဝါးဌာနကို အရေးပျေါအသုံးပွုခှငျ့ပွုတဲ့ ကာ ကှယျ ဆေးအဖွဈခှငျ့ပွုဖို့ နိုဝငျဘာလ တတိယ ပတျလောကျ မှာ လြှောကျထားဖို့ ရှိတယျလို့ သိ ရ ပါ တယျ ။
ကိုကို : စကျမှု တက်ကသိုလျ
Previous post နေခြည်ဦး ရဲ့ အိုက် တင် တွေ ပိုကောင်း လာတယ် လို့ ချီးကျူး လိုက် တဲ့ အောင်ရဲလင်း
Next post အာဇာနည်ကို မရွေးချယ်ခဲ့လို့ ပြုတ်သွားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ အ ပေါ် ပြိုင်ပွဲဝင် ရွှေမှုံ ပြန်လည် တုန့်ပြန်လိုက်ပြီ